Shirka Bini'aadaminimada oo Istanbul ku soo xirmay - iftineducation.com
iftineducation.com – Shirka caalamiga ee bini’aadaminimada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waa shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah oo uu ku baaqay xoghayaha ee qaramada midoobay si wax looga badallo sida caalamku ula tacaalo dhibaatooyinka bini’aadaminimo oo kuwoodii ugu dambeeyay ay ka mid yihiin qaxootiga dalka Syria. Abdirahman Koronto, oo BBC uga soo waramayay shirka, ayaa warbixintan nooga soo diray.
Xoghayaha guud, wuxuu rajo xumo ka muujiyay in hogaamiyayaasha dalalka deeq bixiyayaasha ugu waawayn ay goobta ka maqnaayeen. Waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalalka ku bahoobay G7, oo ra’iisul wasaaraha Jarmalka, Angela Merkel oo kaliya ay ka joogtay. Madaxwaynaha dalka Turkiga, Tayib Erdogan, ayaa xusay in wax ka qabsho la’aanta bini’aadaminimada aysan ahayn mid ku timid dhaqaale yaraan, balse ay la xiriirto naxariista oo yaraatay, Wuxuu sheegay in dalka Turkigu ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo qaxooti Syrian iyo Iraaqiyiin ah, ayna yar tahay caawinaadda dibedda ee ay helaan.